कसरी वाइफाइ नाम र पासवर्ड परिवर्तन गर्न सकिन्छ ग्याजेट समाचार
कसरी वाइफाइ नाम र पासवर्ड परिवर्तन गर्न सकिन्छ
पहिलो घरहरूमा इन्टरनेट जडान थियो। त्यसपछि ब्रॉडब्यान्ड, ADSL, र फाइबर अप्टिक्स। र सबै अघिल्लोमा एक अनिश्चित क्षणमा, वाइफाइ हाम्रो घरमा आयो। र यसको साथमा, हातमा हातले सम्भावना आयो कि कुनै पनि अपरिचित व्यक्तिले कुञ्जी थाहा पाएर, हाम्रो नेटवर्कमा जडान गर्न सक्दछ र कुनै शारीरिक जडान बिना यसको हिम्मतमा जान्छ।
हाम्रो अवरोधकर्ता र हाम्रो नेटवर्क बीच रहेको मुख्य बाधा वाइफाइ नेटवर्कको पासवर्ड हो। यो बिना, यो राउटर पहुँच गर्न सम्भव छैन र, वास्तवमा, जब हामी नयाँ उपकरणबाट जडान गर्न चाहन्छौं पहिलो चरण भनेको त्यो कुञ्जी प्रविष्ट गर्नु हो। तर के यो एकमात्र बाधा हो जुन अवस्थित छ? हामीसँग सामेल हुनुहोस् र पासवर्ड परिवर्तन गर्न सिक्नुहोस्, र तपाइँको नेटवर्क मा घुसपैठिएर जोगिन।
1 हाम्रो नेटवर्क बुझ्दै
2 पहिलो कुरा: राउटर पहुँच गर्नुहोस्
3 के हुन्छ यदि यसले १ 192.168.1.1 २.१XNUMX.१.१ सँग काम गर्दैन?
हाम्रो नेटवर्क बुझ्दै
हाम्रो वाइफाइ नेटवर्क कसरी काम गर्दछ भन्ने बारे स्पष्ट हुनको लागि, हामीले पहिले यसको योजना थाहा पाउनु पर्छ। सबै भन्दा साधारण एक राउटर हुनु हो, हाम्रो इन्टरनेट कम्पनी द्वारा प्रदान गरीएको, र त्यो राउटर हो संकेत वितरण गर्न, दुबै केबल र वायरलेस रूपमा, बाँकी उपकरणहरूमा।
तर त्यहाँ केस हुनेछ जहाँ, राउटर र हाम्रा उपकरणहरू (मोबाइल फोन, ट्याबलेट, कम्प्युटर, आदि ... बीच) ब्रिजको रूपमा अभिनय गर्ने अन्य उपकरणहरू गरौं, कि त हाम्रो नेटवर्कको संकेत विस्तार गर्न वा यसमा गति गुमाउनबाट बच्न। हामीले भर्खर तपाईलाई सटीक बारेमा भनेका थियौं तपाईंको वाइफाइ नेटवर्कको स the्केत कसरी विस्तार गर्ने र यसको दायरा विस्तार गर्ने रिपीटरहरू जस्ता उपकरणहरूको श्रृंखलाको माध्यमबाट, जुन हामीले पनि ध्यानमा राख्नुपर्नेछ।
पहिलो कुरा: राउटर पहुँच गर्नुहोस्
पहिलो चरण हाम्रो नेटवर्कको सुरक्षा सुधार गर्न र पासवर्ड परिवर्तन गर्न तिनीहरूलाई हाम्रो जानकारी पहुँच गर्नबाट रोक्नको लागि राउटर पहुँच गर्न छ। तर होइन, यसको मतलब यो होइन कि स्क्रूड्राइभल बाहिर निकाल्नु र यसलाई भित्र पस्न खोल्नु हो। यो यो भन्दा धेरै सरल छ।
नेटवर्कमा जडित कुनै पनि उपकरण जस्तै यो कम्प्युटर, ट्याब्लेट, मोबाइल वा कुनै ग्याजेट, राउटरको पनि आफ्नै ठेगाना छ यस भित्र ठीक छ, हामीले त्यो ठेगाना पहुँच गर्न यो पत्ता लगाउनु पर्छ। सामान्य नियमको रूपमा, राउटर एक नेटवर्क मा पहिलो तत्व हो, त्यो हो, तत्व जसबाट नेटवर्कमा जडान भएका बाँकी उपकरणहरू ह्या hang्ग हुन्छन्, यो मोबाइल फोन, ट्याब्लेट, कम्प्युटर, इत्यादि हो। यो त्यस कारणले हो राउटर ठेगाना,% 99% मामिलाहरूमा, १ 192.168.1.1 २.१XNUMX.१.१ हुनेछ.
हामीले यस ठेगानालाई ब्राउजरमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ जुन हामीले मन पराउछौं, क्रोम, ओपेरा, सफारी, फायरफक्स, आदि, र इन्टर कुञ्जी थिच्नुहोस्, मानौं कि हामी कुनै वेबसाईटमा पहुँच गरिरहेका छौं। एकचोटि पृष्ठ लोड भएपछि हामी त्यसलाई फेला पार्नेछौं यसले कन्फिगरेसन पहुँच गर्नका लागि हामीलाई प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड सोध्छ यसको। यी पहुँच डाटा यसको तल फेला पार्न सकिन्छ, WiFi नेटवर्क आफैंको लागि पूर्वनिर्धारित पासवर्डको साथ।
एक पटक हामीले राउटरको कन्फिगरेसन मेनूमा पहुँच गरेपछि, हामी इच्छा मा प्यारामिटर को एक ठूलो संख्या को फरक गर्न सक्दछौं यसको। मेक र मोडेलमा निर्भर गर्दै, हामी परिवर्तनहरू गर्दा अधिक वा कम स्वतन्त्रता पाउनेछौंयद्यपि ब्लूसेन्सबाट हामी न्यूनतम सम्भावित प्यारामिटरहरू छुने सिफारिस गर्दछौं र ती हामीलाई थाहा छ सुरक्षित छन्, किनकि हामी राउटर वा इन्टरनेट जडान आफैंमा कन्फिगर गर्न सक्दछौं, र हाम्रो कम्पनीको टेक्निकल सेवाबाट पुनःभण्डारणको लागि भ्रमण आवश्यक छ।
जस्तो कि तपाईं माथिको छविमा देख्न सक्नुहुनेछ, मेरो केसमा मोभिसार एडीएसएल राउटरको साथ, हामीसँग हालको वाइफाइ पहुँच पासवर्डको साथ एक नजर रहेको छ। यो एक हो जसलाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्दछ, सावधान भए पनि, हामीले बिर्सनु हुँदैन कि यसलाई परिवर्तन गरे पछि, हाम्रा सबै उपकरणहरू वाईफाई मार्फत जडान भयो स्वचालित रूपमा विच्छेदन हुनेछ, र हामीले फेरि पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ फेरि जडानको आनन्द लिन।
हामी पनि गर्न सक्छौं, अहिलेको समयमा, हाम्रो वाईफाई नेटवर्क को नाम परिवर्तन गर्नुहोस्, जो एक हुने छ कि सबै उपकरणहरु को लागी देखाईनेछ कि ईन्टरनेट को उपयोग गर्न को लागी कनेक्ट गर्न को लागी। हामीले भर्खरै फाँटहरू परिमार्जन गर्नुपर्नेछ र ठीक क्लिक गर्नुहोस्।
तर अब एक कदम अगाडि जान गरौं। के तपाईंलाई सम्झना छ कि त्यहाँ कन्फिगरेसन पहुँच गर्न पासवर्ड छ? ठिक छ यदि हामी चाहन्छौं सुरक्षा सुधार गर्नुहोस् हाम्रो नेटवर्क को अधिक, कन्फिगरेसनको पहुँचको लागि त्यो पासवर्ड परिवर्तन गर्दा यसले चोट पुर्‍याउँदैन। त्यो याद गर्नुहोस् सबै बाधा अवरोधहरू छन् हामी जडान चोरी गर्नबाट रोक्नको लागि वा हाम्रो कम्प्युटर वा उपकरणहरूमा भण्डारण गरिएको डाटा पनि।
उही कन्फिगरेसन स्क्रिनमा, हाम्रो केसमा, हामीसँग विकल्प छ पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहोस्. माथिको छविमा हामीले देख्न सक्ने बटनमा क्लिक गरेर, ड्रप-डाउन खुल्नेछ जुनमा हामीले पुरानो पासवर्ड निर्दिष्ट गर्नुपर्नेछ, साथै नयाँ पासवर्ड पनि दुई पटक दोहोर्‍याउनुपर्नेछ जुन हामी राउटरमा पहुँचका लागि स्थापना गर्न चाहन्छौं।
याद गर्नुहोस्, राउटर मोडेलमा निर्भर गर्दै, चरणहरू भिन्न हुन सक्दछन्हुनसक्छ, त्यहाँ एक विकल्प छ जुन हामीले मेनूहरूको बीचमा अझ बढी खोजी गर्नुपर्दछ र यी परिवर्तनहरू गर्न हामीसँग हातहरू नजिक भएको छैन। हामीले भर्खरै गर्नु पर्छ बिभिन्न मेनुहरूको बीच नेभिगेट गर्नुहोस्, र एउटा खोज्नुहोस् जुन वाइफाइ नेटवर्कको सुरक्षालाई जनाउँछ नाम र पासवर्ड परिवर्तन गर्नका लागि, वा पहुँच डेटामा पासवर्ड परिवर्तन गर्नका लागि.
के हुन्छ यदि यसले १ 192.168.1.1 २.१XNUMX.१.१ सँग काम गर्दैन?
यो सम्भव छ कि, अधिक जटिल स्थापनाहरूको अवस्थामा, थप तत्वहरू समावेश सहित, वा त्यो राउटर हामी पहुँच गर्न चाहन्छौं कम्पनीको आफ्नै होईन, राउटरको आईपी ठेगाना पूर्वनिर्धारित छैन। यो अवस्था मा, हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ। चिन्ता नलिनुहोस्, किनकि यो एक हो वास्तवमै सरल प्रक्रिया, र केवल केहि संख्या फरक हुनेछ, किनभने स्किमा जहिले पनि "192.168.xx" राख्नेछ.
यदि हाम्रो अपरेटिंग प्रणाली छ Windows, हामी हुनेछ कमांड प्रॉम्प्ट पहुँच गर्नुहोस्, कि हो, थिच्नुहोस् शुरू र टाइप गर्नुहोस् सीएमडी। विशिष्ट कालो विन्डोज कमान्ड विन्डो खुल्नेछ, र लेख्न ipconfig र इन्टर थिच्दै, हामीलाई हाम्रो जडानको सबै विवरणहरू देखाउनेछ.
एक पटक हामीसँग यसको सबै विवरणहरू छन्, हामीले यसमा हेर्नुपर्दछ पूर्वनिर्धारित गेटवे। ठेगानाले हामीलाई दायाँ मार्क गर्दछ जुन हामीले राउटर पहुँच गर्नका लागि प्रयोग गर्नुपर्दछ। यदि तपाइँ प्रयोग गर्नुहुन्छ म्याक, यो चरण धेरै सजिलो छ। हामीले भर्खरै गर्नु पर्छ बटन होल्ड गर्नुहोस् सबै हाम्रो किबोर्डमा, एकै समयमा हामी वाईफाई कनेक्शन मेनू क्लिक गर्दछौं, शीर्ष पट्टीमा।
हामीले खातामा लिनु पर्ने मान भनेको फ्रेमि that हो, जुन हो राउटर ठेगाना। यद्यपि प्रत्येक केसमा फरक हुन्छ सँधै "192.168.xx" ढाँचा अनुसरण गर्दछ।। एकचोटि हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो राउटरको ठेगाना छ, यो समय यसमा पहुँच गर्न हो। यसको लागि हामीले गर्नै पर्छ वेब ब्राउजर प्रविष्ट गर्नुहोस्, र त्यस ठेगानामा लेख्नुहोस्, पहुँच गर्न प्रविष्ट थिच्नुहोस्। यहाँबाट बाँकी सबै चरणहरू उस्तै उस्तै हुनेछ जुन तपाईंले पहिले देख्नु भएको थियो।
यी साधारण चरणहरूको साथ, तपाईं पाउनुहुनेछ तपाईंको WiFi नेटवर्कको सुरक्षामा सुधार ल्याउने, र सबै माथि डेटा सुरक्षित राख्नुहोस्। तर यद्यपि तपाईं यो पहुँच गर्ने घुसपैठिको संभावना कम गर्नुहुनेछ, याद गर्नुहोस् कि यदि तपाईं अझै शंकाहरू छन् भने, तपाईं यो सानो गाईड अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ र निश्चित गर्नुहोस् कि यदि वास्तवमा कसैले तपाईंको वाइफाइ चोर्दै छ भने।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » कसरी वाइफाइ नाम र पासवर्ड परिवर्तन गर्न सकिन्छ
पीडीएफ कागजात कसरी बनाउने